Njikwa Ahịa: Ndị Ahịa Ahịa na Ahịa Ahịa Ebere
Nike na-ebunye ọtụtụ ngwaahịa ndị egwuregwu asọmpi.
N'ime ụdị aha ndị America, enwere naanị ụdị abụọ: ndị na-azụ ahịa na-elekwasị anya or ngwaahịa na-elekwasị anya.
Ọ bụrụ na ị ga - arụ ọrụ ọ bụla ị ga - eji akara gị rụọ ọrụ, ma ọ bụ na ị na - akwụ ụgwọ ka ị na - akpachi anya na akara onye ọzọ, ị ga - amata ụdị ụdị ị nwere. Iwu nke otu esi arụ ọrụ na nke ọ bụla dị ezigbo iche ma gbasaa ruo ala na izi ozi, mmepe ngwaahịa ọhụụ, nhọrọ ọwa, njirimara ngwaahịa / uru, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Mmepe ma ọ bụ Nhọrọ Marketingzụ ahịa.
N'ezie, ị ga-ajụ: "Ọ bụ na ọ bụghị niile ewere ụlọ ọrụ kwesịrị-elekwasị anya na ma n'ji NA ngwaahịa?" Ọfọn, ee. Mana ihe dị mkpa ebe a bụ ụdị ika ahụ, yana otu o si chọọ itolite. Ka anyị dive na:
Ahịa Onye Ahịa Na-eche
Ahịa lekwasịrị anya na-egosipụta ụdị onye ọrụ dị mkpa, wee na-ebute oke ngwaahịa na-egbo mkpa onye ọrụ ahụ. Maapụ nke ụdị ika a yiri nke a:
Ihe Nlereanya nke ụfọdụ oké n'ji-lekwasịrị anya ụdị: Nike, apụl, BMW, Harley-Davidson
N'ihe banyere Nike, a na-eche ụdị ahụ gburugburu Egwuregwu asọmpi. Nike lekwasịrị anya na ndị na-agba ọsọ egwuregwu, mana ha na-ewepụta karịa karịa akpụkpọ ụkwụ; ha na-ewepụta ngwaahịa niile gbara ya gburugburu nke Onye Ọsọ egwuregwu chọrọ maka ahụmịhe. Dịka ọmụmaatụ, na basketball Nike na-ere akpụkpọ ụkwụ, ndị na-ekpo ọkụ, nịịka, akwa, akwa isi, karama mmiri, akpa egwuregwu, akwa nhicha ahụ, na bọọlụ. Naanị ihe ha anaghị ere bụ ụlọ basketball, mana ha nwere ike ịkwado ya.
Echiche nke na ha na-ere ngwaahịa basketball ndị a niile nwere ike ịdị ka obere okwu, mana ọ bụghị. Ọ bụ otu akụkụ nke ihe na-eme Nike ụdịrị ngwa ahịa a na-azụ ahịa. Ha malitere dị ka ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ, ma mechaa dị ka ebe ha ga-aga maka ahụmịhe egwuregwu. Ha ejiriwo ọtụtụ ngwaahịa mechie ọtụtụ ngwaahịa, na-eji ọtụtụ ụlọ ọrụ, na ọtụtụ teknụzụ, n'otu echiche basketball basketball.
Iji gosi ọdịiche a: Ọ bụrụ na Cole-Haan ga-eme nke a gburugburu Ndị ọkachamara n’achụmnta ego. Ha ga-ewu ụlọ ọrụ nke na-abụghị naanị na-ere akpụkpọ ụkwụ ejiji, kamakwa na-ere uwe, azụmaahịa, agbụ, akpa, folios, pensụl, na iko kọfị. Cheedị ụdị mgbalị mmepe ngwaahịa ọ ga-ewe iji wuo usoro ndị ahụ niile. (nke bụ kpọmkwem ihe ha bụ eme)
Ahịa-lekwasịrị Anya Brand
Ahịa a na-elekwasị anya na ngwaahịa na-egosipụta ụdị nsogbu bụ isi, wee jiri njupụta nyefee ihe ngwọta nye ụdị onye ọrụ ọ bụla na-ezute nsogbu ahụ. Maapụ nke ụdị ika a yiri nke a:
(Ihe Nlereanya nke ụfọdụ oké ngwaahịa-okowụk ụdị: Osimiri, Crest, Kleenex, Coke, McDonalds, Marlboro, Google)
Coca-Cola emeela ezigbo ọrụ idozi akpịrị ịkpọ nkụ / afọ ojuju nsogbu maka ụdị ndị ahịa niile. Coke anaghị eme ihe ọ bụla ọzọ karịa cola, mana ọ na-enye ya ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke na ọ dị obere mmadụ dị ndụ nke na-anaghị aghọta onyinye ngwaahịa Coke.
Naanị ha na-agbanwe ihe ole na ole (shuga na caffeine) na ụzọ nnyefe (isi iyi, karama, nwere ike) ma nwee ike ịpịa ndị ahịa ọ bụla. A atụ ole na ole: Maka ezinụlọ dị n'ụlọ: karama lita abụọ; n'ihi na on-na-na-na-aga ibu-maara mmadụ: 2 oz diet coke canans; maka onye na-eri nri ngwa ngwa na-achọ ọtụtụ uru: isi iyi soda na-adịghị agwụ agwụ; maka ụlọ nchebe ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ nke ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ: ọkpọ karama 12 oz. Otu ngwaahịa, dị iche iche ahịa chọrọ zutere.
Ya mere, olee ụdị akara m nwere?
Enwere ule di egwu nke ichota udiri ika ichoro. Mana mbu, ihe edeturu na ihe kpatara ị kwesiri iji mara nke a dika onye ahia ahia ma obu mmepe ahia. Ọ bụrụ na ịmara ụdị akara ị bụ, ọ na-agwa gị ihe ị gaghị eme.
Ya bụ, agbanwela onye ahịa ma ọ bụrụ na ị nwere akara ahịa lekwasịrị anya, ma gbanwee ngwaahịa nke ngwaahịa a lekwasịrị anya. Amaara m na nke a dara ụda, mana m nọdụrụ ala n'ọtụtụ nzukọ Ọganihu Ngwaahịa iji chee na ọ naghị eme. N'ezie, m na-azọ ebe n'Italytali, enwere onye ọrụ na Ferrari (onye ahịa: macho speed guy) na-atụ aro ka ha webata SUV ọhụrụ (onye ahịa: mama bọọlụ). Ihe niile n'ihi na ha aghọtaghị nlekwasị anya ha.
Gịnị bụ nnwale litmus? Mfe:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ itinye akara ngosi ahụ ebe ahụ gị, ma ọ bụ tinye ya n'ụgbọ ala gị, ọ bụ ahịa-okowụk ika.
Ọ bụrụ n’iche nnukwu akara ahụ, mana ịchọghị iyi ya, ọ bụ ngwaahịa-okowụk ika.
Ọ bụrụ na ị chọghị iyi ụdị ahụ, ma ọ bụ chee nke ọma, ọ bụ naanị ọjọọ ika.
Tags: brandahia ahiacoca-colaCokeinyenikepepsi
Ọkt 17, 2011 na 12:49 AM